Ii-FAQs -Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd.
Ngaba uthengisa inkampani okanye umenzi?
Singumzi mveliso, bonke oomatshini benziwe sithi kwaye sinokunikezela ngenkonzo ngokwezifiso ngokwemfuno zakho.
Uphi indawo yakho yefektri? Ndingandwendwela njani apho?
Umzi-mveliso wethu ubekwe eShenzhen, China. Ungasindwendwela ngenqwelomoya. Yimizuzu engama-25 kuphela ukusuka kumzi-mveliso wethu ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseShenzhen. Singalungiselela imoto ezokukuthatha apho.
Lide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?
Ngokubanzi ziintsuku ezingama-3-5 ukuba iimpahla zisesitokhwe. okanye ziintsuku ezingama-15-45 ukuba iimpahla azikho kwisitokhwe, ngokusekwe kubungakanani kunye neemfuno zakho. Sizakuyihambisa ngexesha njengomhla esivumelene ngawo omabini amacala.
Ndingawufaka njani umatshini wam xa ufika?
Siza kubonelela ngokufaka iividiyo kunye nezifundo, okanye sinokucwangcisa umnxeba wevidiyo ASAS umatshini ukulungele kwindawo yakho ukukufundisa indlela yokusebenzisa oomatshini. Kwaye ukuba ufuna, singathumela injineli yethu ecaleni kwakho ukukunceda uvavanye kwaye uqeqeshe amagcisa akho.
Kuthekani ukuba umatshini uyasilela ngexesha lokusetyenziswa?
Iimveliso zethu ziya kuvavanywa ngononophelo kwaye ziqinisekiswe ngaphambi kokuziswa, kwaye siya kubonelela ngemiyalelo echanekileyo kunye neevidiyo zokusebenzisa iimveliso; Ukongeza, iimveliso zethu zixhasa inkonzo yesiqinisekiso, ukuba kukho nayiphi na imibuzo ngexesha lokusetyenziswa kwemveliso, nceda unxibelelane nabasebenzi bethu.
Sisiphi isiqinisekiso ukuba sithenga kuwe?
Bonke oomatshini aba-odolwe kuthi baya kubonelela ngesiqinisekiso sonyaka omnye ukusukela kumhla wokuhanjiswa. Ukuba kukho naziphi na izinto eziphambili ezaphukileyo ngaphakathi kwewaranti kwaye azibangelwa kukusebenza gwenxa emva koko siya kunikezela ngamalungu amatsha simahla.
Yeyiphi intlawulo oyamkelayo?
Sisebenzisa i-T / T okanye i-L / C ngokubanzi, kwaye sinokuthetha-thethana ngendlela yokubhatala.
Iinkonzo zokuthengisa kwangaphambili:
1. Ukubonelela ngenkxaso yobugcisa.
2. Thumela ikhathalogu yemveliso kunye nevidiyo yokusebenza.
3. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo PLS nxibelelana nathi kwi-intanethi okanye usithumelele i-imeyile, siyathembisa ukuba siza kukunika impendulo ngexesha lokuqala!
4. Ukufowunelwa buqu okanye ukutyelelwa ngumzi-mveliso kwamkelekile.
1. Siyathembisa ukunyaniseka nokungakhethi cala, kuyonwabisa ukuba sikukhonze njengomcebisi.
2. Siqinisekisa ukufika ngexesha, umgangatho kunye nobungakanani bokumisela ngokungqongqo imigaqo yesivumelwano.
3. Sijolise ekunikezeleni ngesisombululo esinyathelo esinye kwiimfuno zakho
1.Ukuzithenga phi iimveliso zethu iwaranti yeminyaka eli-1 kunye nolondolozo lobomi obude.
2. Inkonzo yomnxeba yeeyure ezingama-24.
3. Isitokhwe esikhulu samacandelo kunye nezahlulo, iinxalenye ezinxitywa ngokulula.
4. Injineli inokuya kwindlu ngendlu.